Svondo, July 1, 2012 Svondo, July 1, 2012 Michael Reynolds
Ini ndinobvuma… chiziviso chazvino che kuparadzana pakati peTwitter neInternetInodziya moyo wangu. Hapachina vanhu vanozogona kungoita zvisina musoro kupururudza avo ekuvandudza epaTwitter muLinkedIn vasina kana kupinda mukati nekuita.
Kunyange ini ndichiziva kuti vamwe vanogovana neni glee, ndezvipi zvakanaka nezvakaipa zvekuyambuka-kubatanidza yako Twitter account kune mamwe ma network? Sezvo Facebook ichiri kubvumidza iyi tsika, ichiri kuitika. Kunyange ichindityaira nzungu, ini ndinobvuma kuti kune zvimwe zvakanaka if inoshandiswa zvine hunyoro - asi ingangoita pane imwe yakamboita.
Saka ndezvipi zvakanaka?
Inoshanda. Iko hakuna kuramba kwekuti isu tese tiri kuwedzera kubatikana uye tine shoma nguva yekuenderana neakawanda masocial network. Ne auto-kutumira kubva kune imwe uchienda kune imwe, uri kunyatso chengetedza nguva. Yakanaka kucheka uye kuoma.
Pamusoro pezvo, kana iwe uri kushambadzira pasocial media, zvinowedzera kusvika kwako. Zvisinei…
Imwe yekudzikira kwekubatanidza maakaundi aya pamwe ndeye "weird syntax" chinhu. Nhaurirano dzepaTwitter dzinosanganisira zviratidzo zvakanangana nenetiweki iyi, se "@" zviratidzo uye ma hashtag (ona: chii chinonzi hashtag?). Kana vashandisi vepaFacebook vakaona mavara aya munhau dzavo, iwe unomhanyisa njodzi yekuvaparadzanisa nekuti zvinyorwa zvako zvinoita kunge zvinokanganisa uye zvisinganzwisisike. Izvi zvinoderedza kubatanidzwa.
Pamusoro pezvo, kushandiswa kwemagariro enhau anowanzo sanganisira achiteerera, uye kana iwe uri kuyambuka-kubatanidza inogadziridza saka hauna chikonzero chekupinda mukati uye kutaura kune chero munhu. Iwe wakanamatira mukati nhepfenyuro modhi.
Zvakaipa kana uchienda kune imwe nzira, futi. Ndiri kuona vanhu vanosundira kwavo Facebook kugadzirisa kuTwitter, futi, izvo zvinoguma nezvakabviswa zvigadziriso (senge ichi) kana zvakatonyanya, nherera inosangana isina tsananguro (senge ichi).
Chekupedzisira - zvinongo gumbura, handiti? Hatina kuneta here nekuona husimbe mamiriro emamiriro azere nezviratidzo zvekunze kwemamiriro uye akachekwa matweets?
Seta Maprofiles ako Mahara
Ndingakurudzira kutora mukana uno kuti ubvise maakaundi ako epaFacebook neTwitter uye utange chaiko kutora chikamu padandemutande rega rega nechinangwa. Ini ndinofungidzira iwe uchaona akakwirira mazinga ekubatana uye iwe uchave uchivashandisa iwo nenzira yavakange vakagadzirirwa: se mumagariro mitambo.
Tags: FacebookLinkedInevanhu vezvenhauTwitter
Kurera Vatengi Ratings neKutsemura Ongororo
Jul 1, 2012 na12: 10 PM
Ndiri kutya kuti hapana nzira yandinozovasunungura. Tiri kusundidzira toni yezvinyorwa uye chinangwa hachisi chenguva dzose kukurudzira hurukuro - kazhinji ingori yekupa ruzivo kune vateereri vedu. Mupfungwa iyoyo, zano rakabudirira. Kunyange ini ndichida kupa meseji meseji uye kugara pasocial media zuva rese… ini handina kupihwa mukana iwoyo.
Jul 1, 2012 na8: 06 PM
Ini ndaifunga kuti iwe ungati izvozvo, Doug 🙂 Isu tese tinoshandisa masocial network zvakasiyana uye kana chinangwa chako chiri chekushambadzira ipapo pfungwa dzako dzinonzwisisika. Ini zvirokwazvo ndine zvandaifarira (zviripachena) asi hazvireve kuti kune yakajeka "chaiyo" kana "yakashata".
Jul 1, 2012 na8: 03 PM
Ini ndinofunga kuvabatanidza izano rakanaka. Ini ndinofanira kubvuma ini ndaiwanzovabatanidza asi ndikazoona kana iwe usina zvitsva zvemukati papuratifomu yega sechikamu chekushambadzira pamhepo saka vanhu havana chikonzero chekutevera imwe neimwe account.
Jul 2, 2012 pa 10: 12 AM
Automated social media inochengetedza nguva, asi inogona kutora iyo yemagariro element kana ukasangwarira. Zvinogona kuve nyore kushambadzira iwo iwo meseji pamataneti uchishandisa masocial media maturusi asi iwe unofanirwa kuyeuka kutarisa yega account uye kupindura kana paine mibvunzo. Iwe haugone "kumisa uye kukanganwa".
Jul 3, 2012 pa 7: 18 AM
Ndinobvuma zvachose. Inochengetedza nguva munguva pfupi, asi ine mhedzisiro yakaipa mukureba kwenguva. Kwete chete inotaridzika kunge yakasviba, asi zvinopesana neiyo hwaro hwese hwezvemagariro midhiya.